Ngokuya "isigaba komhlaba" futhi "ukusetshenziswa kuvunyelwe" ngokuvamile kukhona ukudideka. Ongelutho umehluko phakathi nale migomo akulula ukuqonda. Futhi okwamanje banayo umehluko isici. Futhi lo mehluko kuwusizo ukucabanga ukuze sigweme izinkinga zomthetho labo abhekane noshintsho ngesimo esingokomthetho umhlaba.
Umqondo "Ukusetshenziswa komhlaba" futhi "ukusetshenziswa kuvunyelwe" eqinisweni aphelele. Kodwa igama elithi "Isigaba" sisonke - bemvelo ajwayelekile, kanye nezinye - "buka" - kukhona ukucacisa ongakhetha ukusetshenziswa kungenzeka zomhlaba ngaphakathi isigaba esithile.
Ngokwesibonelo, uma imikhakha yezolimo ezweni izingxenye kukhona, bangaba eziyisisekelo kanye pair of ukusebenziswa okwengeziwe. Ukuze umqondo wegama elithi "Isigaba" kuyinto inhlangano imigomo akuvunyelwe. Okungukuthi, ngokwesibonelo, futhi endaweni eyodwa ayikwazi kanyekanye ubheke Isikhwama ihlathi futhi senzelwe ukwakhiwa ezimbonini noma ukwakhiwa indlu yokuhlala.
Umtsetfo lokhona ngayo ukuhlukanisa ngokuqinile kuchazwe imikhakha ezweni lapho uya khona. Zakhiwa:
- umhlaba emizaneni;
- injongo ekhethekile (esetshenziselwa izidingo zokuthutha, ukuxhumana kanye izicelo ezimbonini);
- ezingcwele, nemvelo reserves nezinye iziqiwi nge isimo somlando namasiko noma sesayensi;
- amanzi namahlathi amafa;
Noma imiphi yale amasayithi kuleli zwe akunakubangelwa kuphela komunye iyiphi inhlobo inikezwe komhlaba. Land, kuvunyelwe ukusetshenziswa adinga ushintsho izithakazelo ukuthuthukiswa kwesifunda, kukhona wemfanelo izidumbu zomthetho yezihloko RF, ngubani anelungelo isinqumo esinjalo.
Siphi isici is a division of emizaneni indawo nemizana? Izimiso kusekelwe ezindaweni ezihlobene nokubekwa zokuhlala, izimboni kanye nezinye. Ngokwesibonelo, uma ingxenye ethile yedolobha siyindawo umsebenzi ngemva kwamashumi eminyaka kwenziwa emikhulu amabhizinisi zezimboni, ukwakha eduze ke enkulisa noma isakhiwo sokuhlala ngeke bavunyelwe. Lokhu kungenxa isidingo ukuze uzivumelanise nezindinganiso ngokomthetho mayelana ibanga phakathi endaweni izindawo zezimboni kanye yokuhlala.
Land Ikhodi WaseRussia (Article 85) kuthiwa delimited by 8 esishintshashintshayo ngetinhloso letehlukene, okungase akhona ngaphakathi kwemingcele iyiphi zokuhlala. Sikhuluma ezindaweni okuhlalwa kuzo, umhlaba nakhelwe izikhungo kwethulwe intuthuko emhlabeni kahulumeni (amahhovisi, ezikoleni, ezibhedlela kanye nokunye okufana nalokho), noma aphendukele nezindawo zokuzithokozisa (Spas kanye amapaki), ezolimo, izimboni, senzelwe nokuthuthukiswa kwengqalasizinda yezokuthutha kanye nezindawo Ministry Defense , izindawo nezinye izinjongo ezikhethekile.
Ngamunye izingxenye indawo has ngokomthetho ilungelo lokusebenzisa njengoba ezimbalwa zezinhlanzi ezengeziwe kahle ichazwe. Ikakhulukazi, uhlela izimiso ivumela phakathi kwezindawo zokuhlala ukwakha amakhaya ukuthuthukiswa zokuhlala (ephezulu liphumele, maphakathi-ukuvelela okuxubile-zinhlobo). Leli lungiselelo kuhlinzekelwe endimeni 5 isihloko inombolo efanayo 85 RF LC.
umehluko wemisindo nemiqondo yamagama anjalo kanye nezidingo ezikhona noma iyiphi enye indawo zokuhlala ngamunye. Shintsha indlela onikeza ngayo ukusetshenziswa komhlaba noma ubani ngaphandle kwemvume akuvumelekile. Uma ukwephulwa nqanda them usathola izinhlawulo eside futhi izakhiwo emthethweni edingekayo ukuze zidilizwe. Bayanda eminyakeni yamuva, iziphathimandla zendawo, usebenzisa imishini esindayo, ukususa okuthiwa amafomu ezincane lathumela, ezifaka hlangana ukuhlahluba ukuhlukahluka emadokodweni ekhona futhi zinsiza.
Indlela ukushintsha ukusetshenziswa kuvunyelwe
Uma ungenayo noma yiluphi ulwazi ngokuthi isigaba ukusetshenziswa komhlaba (noma engqondweni) ingenye noma enye esiteshini, akufanele kube yinkinga. Yonke idatha ezidingekayo ingatholakala ngokuxhumana imibhalo cadastral noma izicelo Khiphela ku Rosreestra indawo. Njengomthetho, bonke abanikazi bamazwe ukuthi iyiphi isigaba osebenza emazweni okungewakho kubo umhlaba ukuthi kungenzeka into ukwakha kuso, nokuthi - ukunqatshelwa categorical. Inkinga sina esengeziwe iningi labo kuba ekunqobeni inqubo eshintsha uhlobo kuvunyelwe ukusetshenziswa.
Njengoba ukwakhiwa yomthetho, kuphambene passport cadastral, akuvumelekile, indlela kuphela umnikazi - ukuhanjiswa sicelosikhalo ucela isabelo esinzima ingxenye ukusebenziswa okwengeziwe. i samuntu njalo is ngempela okwandile siyindlela esisemthethweni ukushintsha isimo ngesakhiwo. Ababusebenzisayo uma ufuna ukuvula isitolo noma ezinye into kabanzi ngokuvula injongo nomphakathi.
Ngicabanga ukuthi ngokuthumela isicelo, ofake isicelo sifinyelele ngokuzenzakalelayo ukudluliswa komhlaba isigaba esisodwa kuya kwenye noma ushintsho ukusetshenziswa kuvunyelwe, akufanele kube. Lokhu kwenziwa kuphela ngesikhathi ngesicelo somnikazi. Umnikazi (noma renter) kumele athuthukise inkolelo sina leso sicelo. Iyoba ukufakazela ukuthi izinguquko, okuyinto afeza, izodlala indima eqakathekileko ukuthuthukiswa kwezenhlalo kwalesi sigodi. ukusatshalaliswa lwezigaba umhlaba futhi bathonye ikusasa labo - udaba olubaluleke kakhulu, futhi umfakisicelo kufanele uzilungiselele impikiswano enkulu ngale ndaba emhlanganweni womkhandlu wendawo (Land yayo Commission) noma kwi ephalamende.
Isicelo senziwe, njengoba umthetho, ifomu khulula ngesisekelo nezimiso ezijwayelekile ngokuhambisa izicelo nezikhalazo kunoma yiziphi izinhlangano zikahulumeni. Kanye naye kuzodinga umfakisicelo ukuhambisa a akhiphe cadastral nekhophi yetayitela idokhumenti eziphathelene impahla. Okungukuthi, abangabantwana inkontileka azimele, umnikelo noma ukudayiswa, isitifiketi ilungelo ifa. Kufayilwe sicelosikhalo kudingeka ucabangele esikhathini esingeqile ezinyangeni ezimbili. Uma iphelile ukuchithwa kwezicelo, sizame ukuxazulula enkantolo. Kodwa kuphela uma isinqumo negative Kunjengoba ezingasebenzi ngoba injongo enhle.
Okuchaza ukuthi isigaba komhlaba wezolimo
Yini ongakhetha for isicelo sabo kukhona? Njengezinye izinhlobo imikhakha ukusetshenziswa komhlaba, iziza wezolimo kukhona uhlobo oluthile ukuthi kungenzeka eziningana. Njengoba bazijwayeze kwindima 11 Article 85 we RF LC, singabona ukuthi umhlaba wokulima uvunyelwe ukuba 'asebenzise "kwelinye kukho okulandelayo:
1. Indlela amadlelo hayfields.
2. Njengoba izingadi.
3. Iziphi izici yomkhiqizo wezolimo (okubalwa imfuyo).
4. Yini izwe amasayithi.
5. izindawo zokulima kanjani ebaleni.
6. Izwe izindawo zezimboni, okuhlanganisa izintambo zikagesi, ephezulu ingcindezi yamapayipi, imigwaqo.
7. umhlaba kanjani yifusi.
Indlela ukusindisa umhlaba yasemakhaya
Insimu esigabeni inikezwe komhlaba (yezolimo) kungenzeka angaphansi ukushintsha ifomu yesicelo sabo. Kodwa ngisho lapha, kukhona umehluko wemisindo nemiqondo yamagama amaningi ezisilinganiselayo ezenza bayeka noma ushintshe omunye izinhlobo kwemikhiqizo yezolimo, zisekelwe kuphela isifiso umnikazi, akunakwenzeka.
Ikakhulukazi, kwenqatshelwe ukushintsha ingxenye isigaba uma esingeqile ukubaluleka kwayo ngokwesilinganiso bezwe esifundeni 50% noma ngaphezulu. In practice, lokhu umthetho osebenza ku amazwe nezindawo izingadi, ezimila zisetshenziswa izitshalo ezibalulekile. Usebenzela ukuvimbela nokwehlisa endaweni lezi zindawo nezinye izinto zenani elikhulu injongo wezolimo.
isigaba Land "komhlaba"
Uma unesithakazelo umbono ukuthenga isiza cheap indlu agugile, okuyinto iseduze umgwaqo omatasa noma stop traffic, okokuqala uhlole ikhodi ye somhleli, lapho kungenzeka ukusetshenziswa esizayo ezweni. Imininingwane enjalo nje othathwe ipasipoti cadastral into ngenxa kokuthola nesitatimende Russian Register.
Uma ingxenye wathi ikhodi kungokwalabo uhlu kusuka 2.0 2.7 we somhleli, kusho lokhu okulandelayo - konke umthengi bazokwazi ukwakha phezu kwezwe - ongaphakeme liphumele indlu yokuhlala. Yiqiniso, akekho yomvimba ukuphula eduze engadini izindlu ukulimela ukuziphilisa, abamba ukushisa encane, noma ukubeka egalaji siqu. Kodwa kuleli zwe ingeyezentengiso ayikwazi ukusetshenziswa.
Ngenxa yalezi zinjongo kudingeka bezwe nge "ibhizinisi-class" amakhodi (4.0-4.9). Ukuba Ngowenkolo lesi sikhathi evumela ukuba kule ndawo capital isakhiwo bemvelo umile. Ngokwesibonelo, esitolo noma yezitolo (Ikhodi 4.2) isakhiwo samahhovisi (ikhodi 4.1), i-ofisi umshwalense noma ebhange (ikhodi 4.5), emakethe (ikhodi 4.3), indawo yokudlela, cafe noma egunjini lokudlela (ikhodi 4.6), ihhotela (ikhodi 4.7) , ukuzijabulisa (ikhodi 4.8), imoto noma imikhumbi (ikhodi 4.9).
On ukuthengwa komhlaba edolobheni
Uma ikhodi wayefisa passport cadastral ayikwazi ukutholwa, akusho ukuthi ukuthengwa akuthathi indawo. Endabeni ka ukubekwa ingxenye oyikhethile, endaweni yomphakathi ezimbonini noma senzelwe ingqalasizinda yezokuthutha ungokoqobo kungenzeka lanezela ukusetshenziswa ezimweni bavunyelwe ukuba samuntu main.
Waphumelela kangakanani Liyoba yini ikhambi lalo magazini incike isikhundla ekuphathweni wendawo (ikakhulukazi, ukuphathwa layo). Uma uhlela sokwakha ibhilidi ukusebenza ngokucacile ekuthuthukiseni umuzi ukwakhiwa kwamathuba emisebenzi ezengeziwe zokuba iziphathimandla zendawo ngikuhlangabeze.
... futhi nakho konke okunye
Isihloko 83rd izingxenye Ikhodi Land eziphathelene isigaba sezwe nemizana, anikezele ekuthuthukiseni nasekwakheni emadolobhaneni, amadolobha kanye nezinye omasipala. Ngokusho inombolo kwesigatshana 3 kanye neSigaba 84 se-Code esimweni ukufakwa edolobhaneni emdeni isimo eyimfihlo ngesakhiwo lilondolozwe. Okusho ukuthi, umnikazi uyaqhubeka esebenzisa ilungelo layo kobunikazi.
Ngaphezu ezindaweni ngenhla emzini, futhi kukhona namanje isigaba esingeziwe - ezweni imbozwe lokusebenzisa isiqu esithi "nezinye izindawo indawo." Lezi zihlanganisa zonke lezo zindawo, injongo okuyinto - ukusetshenziswa jikelele. Okungukuthi, driveways, amapaki, emigwaqweni, tikwele kanye nokunye. N. Iningi ngokuvamile libhekisela ukungena ingxenye eyodwa izingxenye eziyinhloko. ezindaweni ezinjalo ayikwazi ezizimele noma idluliselwe ubunikazi yangasese ngenye indlela.
Mayelana kabi komhlaba
Asho ukuthini leli gama? Ukusebenzisa ngendlela engafanele ezweni kubhekwe ukusebenza kwalo akukho ngokuhambisana njongo, ngoba izigaba ezithile ezweni. Lesi senzo lingena ngaphansi kwencazelo sokwephulwa kwe-yamahlelo ahlangahlangeneko begodu ifaka umthwalo wokuphatha ngaphansi Article 8.8 Ikhodi Administrative.
Usayizi unswinyo kungaba ephawulekayo kakhulu. Citizen (ngabanye) kuyodingeka ukuthi bakhokhe inhlawulo, futhi leyo mali kuxhomeke izindleko nezwe ndawo 0.5-1% kuwo. Inani okungenani emihle kungase kungabi ruble esingaphansi 10,000. By endleleni, uma uNkulunkulu futhi bakhetha ukukwaka, uthi, isitolo esizeni, okuyinto ayenzelwanga, uzothola hhayi kuphela isidingo ukukhokha inhlawulo, kodwa kubhidlizwe izakhiwo ezingekho emthethweni.
Noma yiluphi ulwazi ngalokho zinhlobo kungokwalabo kuvunyelwe ukusetshenziswa omunye site ezisohlwini cadastre State ingcebo. Kuyancomeka ukuthi iyiphi ukusebenza phansi kwandulelwe isingeniso isitifiketi indawo.
Yini kungaba edolobhaneni
Izigaba ayisishiyagalolunye ezindaweni okuhlalwa kuzo, inkomba equkethe isihloko 85-th we RF Land Ikhodi, abantu babe nomuzwa isithakazelo ezimbili kuphela - yokuhlala nakwezolimo. Njengoba abanye bangakwazi nganoma iyiphi indlela ibe impahla isakhamuzi ngabanye. Ngokusho isigaba 5 Article 85 Land Ikhodi, ukusetshenziswa komhlaba endaweni yokuhlala kungenzeka kanje:
1. Ukuze ukuthuthukiswa zokuhlala ngabanye.
2. Ukuze ongaphakeme, aphakathi nendawo kanye ephezulu liphumele wokwakha yokuhlala.
3. ekwakheni izakhiwo kwamasiko noma injongo yasendlini.
Ngokusho inombolo iphuzu 11 isihloko esifanayo, ezingena ngaphansi ezindaweni komhlaba wezolimo ingasetshenziswa ekwakheni izakhiwo kanye izakhiwo, injongo okuyinto - ukukhiqizwa kwezolimo. Enye kungenzeka ukusetshenziswa kwabo - I-umhlabathi olimekayo futhi ekutshaleni zisetshenziswa. Uma uhlela ukuba komhlabathi ngabanye ukwakhiwa kwezindlu, hlola ikhodi passport cadastral eziphathelene nokwakhiwa yokuhlala (2.0 - 2.7).
Kodwa khumbula ukuthi lapha ngeke kukhonjwe isakhiwo, okuyinto injongo - ukuze uhlale ukwelashwa kanyekanye (spa) noma izidingo nokugcinwa ukukhiqizwa okuqhubekayo (isevisi izindlu usebenza amashifu ngendlela).
Uma uhlelela ngabanye ukwakhiwa kwezindlu (izindlu ngabanye), kanye zokuzalela engadini, ubheke okufanayo inombolo kwesigaba 2 bezobhekana. Kakade okukhulunywa amakhodi zibonisa ukuthi leli zwe ingasetshenziswa ukuze kwakhiwe isakhiwo ongaphakeme liphumele kungekho ngodonga phezu flat (hhayi ningi than 3 izibuya), ukwakhiwa surface izakhiwo ezifana emagalaji emadlangaleni for ukwakhiwa engadini (zokulala nalezi zimfuneko zifana isigaba 1), ukulima yangasese epulazini indawo, ekwakheni izakhiwo zesikhashana, ephathekayo namanye, Godyaev ukuhambisa e, okungukuthi, zokudlala, apholile nokuningi. n. lokhu kusho ikhono ukuxhuma izinhlelo zabo Tinsita.
Njengoba sibona, umqondo ngabanye ukwakhiwa kwezindlu kuhlanganisa, ngaphezu ukwakhiwa emakhaya abo, inhlangano yokulima yangasese.
Ukuze ubani uhlela ebhizinisini, kufanele ufune esiqeshini sendawo, ifakwe ikhodi somhleli 4.0-4.9. Kuyinto leli zwe kuhilela ukwakhiwa kwezakhiwo unomphela ke, injongo okuyinto - ukuphumula, ukuhweba, indawo yokulungisa izimoto, nokunye okunjalo. Ake sithi, kokuthi ebanjwe nempahla ngekhodi esigabeni 4.4, ungakwazi ukwakha ku esitolo, ne endaweni - hhayi ngaphezulu kuka-5000 square metres.
Ukuze uthole ezinye izinhlobo zokusetshenziswa komhlaba
Ngokwalo mbiko 37 Town Planning Ikhodi izinhlobo ukusetshenziswa kuvunyelwe kunoma iyiphi indawo ezweni indawo kungaba:
1. main (sikhuluma lapho uya khona okokuqala).
kuvunyelwe 2. Ezihlobene (okusho izindawo kungenzeka).
Cabanga ngamunye kancane xaxa. Ifomu eziyisisekelo kuhilela lelihambisana ingxenye ludizayinelwe ngokuvumelana kwasendaweni futhi endaweni indawo. Ukuze usebenzise ezweni ngokuhambisana nohlobo eyinhloko, Akudingi izimvume ezengeziwe futhi ukugunyazwa okuvela neziphathimandla. Lokho, umnikazi izinhlelo zakho siqu njengoba bachithe esiqeshini sendawo ngaphakathi somhleli nezigaba.
Ngokuphathelene okunemibandela ukusetshenziswa kuvunyelwe yalo, uhlu kubo kubuswa imithetho lwekutfutfukisa esifundeni, lapho sigaba sisebenza. Kodwa kuzo zonke izimo, ukuze ukhethe noma iyiphi yalezi zinhlobo, umnikazi ubophekile ukuba avumelana ngayo iziphathimandla ukuthola imvume edingekile.
Niyayibona injani emsebenzini? Lokucabanga main injongo itulo - SGF. Ngesikhathi esifanayo kunemibandela kuvunyelwe uhlobo ukusetshenziswa - ukwakhiwa luhlobo kwezohwebo. Ukuze uthole umnikazi imvume yokuhlela kumele zifake phakathi isitatimende ku ikhomishini lesifunda, izimpikiswano ezibalulekile of ubunikazi bomhlaba. Impendulo lokho kungatholakala kuphela ngokuthi womphakathi.
Njengoba ukusetshenziswa kokusiza, zingabantu kuvunyelwe ibhekwa kwezinhlobo ezimbili zokuqala kuphela njengoba, futhi loko kungenziwa kuphela ngokuhlangana nabo. Sichaza, ukuzwakala: uma isitolo uvunyelwe ukwakha kwisayithi, inhlangano angezelelweko kungaba, isibonelo, emotweni yokupaka (phansi noma ngaphansi komhlaba).
ISO - Iyini? ISO
Luhlolo zobuchwepheshe forensic kwemibhalo. Ukuhlolisisa forensic lobuchwepheshe kwemibhalo
Plastic Zezıhlabane, ngokuba amabhati (isithombe)